Doorashada Xilligga Dhexe Oo Wali ka Socota Dalka Maraykanka.(Sawirro) – Heemaal News Network
Doorashada Xilligga Dhexe Oo Wali ka Socota Dalka Maraykanka.(Sawirro)
Shacabka Mareykanka ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta, iyadoo uu loolan adag ka dhexeeyo xisbiga Jamhuuriga iyo xisbiga Dimuqraadiga kuwaaso ku hardamaya la wareegidda maamulka labada aqal ee Kongreska.
Doorashada xilligga dhexe ee Mareykanka waxaa hareeyay olole doorasho oo ay kala qaybsanaan ka muuqato.
Waxaa la filaya in tirada codbixiyeyaasha ay sare u kacdo saacadaaha nagu soo aadan.
Waxaa kamid ahaa goobihii doorashada ee ugu hor furmay, sida degaannada xeebta ku yaalla ee gobolka Maine, gobollada New Hampshire, New Jersey, New York iyo Virginia.
Dadka Mareykanka ah ayaa dooranaya 435 xubnood oo ka mid noqonaya Aqalka Congress-ka iyo 35 kursi oo ka mida 100 kursi ee senate-ka.
Sidoo kale waxaa la dooran doonaa. gudoomiyayaasha gobollada iyo xafiisyada heer degmo.
435 kaas xubnood waxaa ka mida Ilhan Cumar, oo ah gabar Soomaali Mareykan ah, oo haddii ay guuleysato noqoto qofkii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee gala congress-ka.
Labadaas midkood ayaa kala ah, gabadh asal ahaan kasoo jeeedda Falastiin, laguna magacaabo Rashida Tlaib oo ka tartamaysa gobolka Michigan, iyo Ilhaan Cumar oo asal ahaan kasoo jeeda Soomaaliya kana tartamaysa gobolka Minnesota.
Erdegon Oo Maraykanka Eedeeyey: Waxaad Noo Muujinaysaan Garab, Toorina Gadaal Ayaad Nooga Dhufateen
Talaabooyinka lagu doonayay in lagu qaboojiyo qalalaasaha dhaqaalaha ee Turkiga ayaa lagu soo waramayaa in uu guul daraystay iyada oo suuqyada ay aad u sabaynayaan. Waxaa kale oo meel xun maraya muranka ka dhaxeeya Maraykanka […]
Ilhaan Omar ayaa noqoneysa qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah oo Qaxootinimo ku taga dalkaasi Mareykanka oo ka mid noqota Aqalka Congress-ka, waxaa ay guushaasi ka gaartay doorashaddii dhexe ee Mareykanka ee shalay dhacday. Waxaa […]
Maraykanka Oo Shaaciyay In 12 Malyan $ Ku Dayactirayo Garoonka Diyaaradaha Ballidoogle
Wasaarada Gaashaandhigga Maraykanka ayaa shaacisay inay lacag gaareysa 12 malyan oo dollar ku bixinayso dayactirka garoonka diyaaradaha Ballidoogle ee gobolka Shabeelada hoose. Saldhigga Ballidoogle ayaa ah xarun lagu tababaro ciidamada somaliya iyadoo saraakiisha tababarka bixinaya […]